Mukhtaar Rooboow oo markii ugu horreysay wareysi xasaasi ah banaanka keenay | Warbaahinta Ayaamaha
MUQDISHO-AYAAMAHA-Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo markii ugu horeesay wareysi bixiyay tan iyo markii dhamaadka sanadkii 2018-kii laga soo xiray magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay marxalado badan oo noloshiisa lasoo daristay iyo xaalka uu hada ku sugan yahay.
Wareysi uu Abuu Mansuur siiyay idaacada VOA ayuu ku sheegay in uu u afduuban yahay shaqsiyaad gaar ah oo katirsan dowlada federaalka, waxa uuna cadeeyay in sifo sharci daro ah lagu soo xirtay uuna ku xiran yahay guri kuyaala Muqdisho.
Abuu Mansuur ayaa sheegay intii xabsiga ay maamusho Hay’adda NISA uu ku xiran yahay kala kulmay dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ah sida caafimaadka, amaanka uuna wajahayo duruufo adag oo dhinaca nolosha xiligan.
Waxa uu sheegay Abuu Mansuur in ciidamo laga keenay magaalooyin katirsan Galmudug halis galiyeen noloshiisa ayna ku dhax dagaalameen qol uu ku xirnaa, waxa uuna xusay in dagaalkaasi hal askari oo dhaxdooda ah ku dhintay.
“Xaalado adag ayey soo martay nolosheeda, mar waxaa dhacday in Ciidan laga keenay Galmudug ay ku dagaalameen qolkeyga waxaa ku geeriyooday hal askari, muddo kaddib waa la iga bedelay, Ammaanka & Noloshada maku dhihi karo way sugan yihiin” ayuu yiri Abuu Mansuur.
Abuu Mansuur ayaana sheegay in uusan aheyn Al Shabaab uuna mar hore isaga baxay , waxa uuna xusay in loo beegsaday loona soo afduubtay hamigiisa siyaasadeed uu xusay in uusan waxba iska bedelin uuna ku raadinayo wado nabadeed hadii uu xuriyadiisa helo.
Hogaamiyahan kasoo goostay Al Shabaab ayaa bishii December ee sanadkii 2018-kii laga soo xiray magaalada Baydhabo isaga oo ah musharax u taagan Madaxweynaha Koonfur Galbneed, tan iyo xiligaasna waxa uu ku xiran yahay xabsi kuyaala Muqdisho.
Dadaalo ay wadeen siyaasiyiin kasoo jeeda Koonfur Galbeed laguna doonayay in xabsiga looga sii daayo Sheekh Roobow ayaa marar badan fashilmay, waxa uuna hada Xiran yahay wadaadkan iyada oon maxkamad xukumin wax dambi ahna ana lagu soo oogin.